‘Komishanka ayaa Iska Leh Eedda Deegaamadda Nabadda ah, Waxay Doorashada Uga Qaban Waayeen’ | Somaliland.Org
‘Komishanka ayaa Iska Leh Eedda Deegaamadda Nabadda ah, Waxay Doorashada Uga Qaban Waayeen’
November 14, 2012	‘Is-Xambaar Dambe Yeeli mayno, Waana Cay Qaawan’
‘Mid Tartamaya iyo mid codaynayaba waxa Somaliland u dan ah Nabad-gelyadda’
Xudan (Somaliland.Org) La Taliyaha Madaxwaynaha Gobolada barri Md. Fu’aad Aadan Cadde ayaa sheegay inaanay illaa imika jirin sansaan doorasho ah oo ka jira degmadda Xudun ee gobolka Sool, waxaanu wax laga xishoodo ku tilmaamay ku dhaqanka wax uu ugu yeedhay is-xambaarka.
Md. Fu’aad Aadan Cadde waxa uu tilmaamay in doorasho la’aanta degmadda Xudun ay eedeeda yeelan doonaan Komishanka doorashooyinka qaranka.
La Taliyaha Madaxweynuhu wuxuu sidaasi ku sheegay Waraysi khaas ah oo uu xalay Khadka Telefoonka ku siiyay Wargeyska DAWAN, isagoo ku sugan magaaladda Xudun. Waxaanu waraysigaasi u dhacay sidan:-
S: Ugu horayn Fu’aad doorashin ayuu dalku galayaa, waa maxay farriinta aad u dirayso shacbiga Somaliland?
J: Mar kastaba waxaan dadka reer Somaliland ku wacyi gelinayaa in ay nabad-gelyada ilaaliyaan isla markaana ay doorashadu ku dhacdo nabad gelyo, taasaana ah ta aynu ku gaadhayno horumar iyo barwaaqo.
Haddii aynaan nabadda ilaalin mid tartamaya iyo mid wax dooranaya midnaba dani uguma jirto nabad la’aan, markaa waxaan leeyahay musharax iyo mid cod bixinayaba nabadda hala ilaaliyo waayo la,aanteed waxba inoo suura gali maayaan.
S: Dhawaanahanba waxaad ku sugnayd degmada Xudun markaa sidaad is leedahay doorashadu way uga dhacaysaa degmadaas?
j. illaa hadda waxaan joogaa Xudun waxaanan diyaar u nahay in doorashadu dhacdo laakiin ilaa imika cid noo timi oo Hargaysa ka timi ama Laascaanood Ka timi oo aanu aragnay ma jirto wax waraaqo ah oo nasoo gaadhay ama komishan noo yimi ama degmada xafiis ka furtay ma aanu arag.
S: Markaa illaa imika ma waxaad leedahay ma jiraan wax ku saabsan arrimaha doorashada oo soo gaadhay Xudun?
J. Kollay anigu xiligan aan kula hadlaayo waxaan ku sugan nahay Xudun meel kalena kama warami karo, laakiin waxaan kuu cadaynayaa xiligan aan kula hadlayo inaanay jirin wax nasoo gaadhay oo komishanka ka yimi heer gobol iyo heer qaran midnaba mar baanu maqalay qolo komishanka ah oo timi Laascaanood oo tidhi Xudun doorasho kama dhacayso.
arrintaana waxaanu u aragnaa in dad xuquuqdoodii lagu duudsiyayo maanta Xudun waa nabad gelyo, mana jirto cabsi ka jirtaa. waxaana ku sugan ciidankii qaranka ee Somaliland markaa meel aanay balaayo ka jirin in la yidhaa doorasho kama dhacayso waxaan u aragnaa dulmi iyo inaan doorashada loo sinayn oo dad xaqoodii la duudsiyayo.
S: Markaa arrintaa eedeeda yaa leh ?
J: Arrinta eedeeda komishankaa iska leh cidina lama wadaagto xukumaduna shaqo kuma laha, waayo marka arrimaha doorashada laga hadlayo waxaa ka masuul ah Komishanka haddii ay doorasho ka dhici waydo deegaan nabad ah oo ciidankii dalku ku sugan yahay, taas macnaheedu waxaa weeye in dalka la kala qaybinayo oo meelna doorasho laga qabanayo meelana iyadoo cid gaara loo danaynayo doorashadaba laga xanibayo.
Markaa waxay muhiimaddu tahay in dalka si isku mid ah wax loogu qabto oo dalka oo dhan doorashadu ka dhacdo. Maanta halkan dadkii joogay waxay diyaar u yihiin inay doorashada galaan waxaanay sugayaan in komishankii yimaado oo xafiis ka furto oo xisbiyadii iyo ururadii yimaadaan hadayse taasi dhici waydo waxay noqonaysaa inaan dalka si isku mida wax loogu doonayn ama dhan wax loo wada wadin.
S: Markaa Fu’aad haddii aanay doorasho ka dhacayn degmada Xudun xildhibaanada halkaa ka sharaxani ma is xambaar ayay doorshada ku gelayaan?
J: Maya, wax is-xambaar la yidhaahdo oo aanu doorasho ku gelaynaa ma jirto waxaasina waa cay iyo gef qaawan oo naloola badheedhay. waxaanan kuu cadaynaaa in isxambaarkaa shaqo aanu ku leenahay aanay jirin kuna gelayn doorasho.
Waxaasina ma aha wax la qaadan karo, ma dawlado hoose ayaa is xambaar lagu gelayaa markay degmadii doorasho ka dhici waydo ee la yidhaa tuulaa lagu dooranayaa waxaan la yaabanay xildhibaanada halkaaa ka soo baxaa ma tuulaad ayay fadhiisanayaan.
Ta labaad waxaa la xambaaraa oday socon kari waayay iyo ilmo yar oo geediga gaadhi waayay markaa maaha inaynu is cayno dadkana la kala fogeeyo.
.markaa waxaan ku talinayaa inaan xaqdaro la nagu samayn mar labaad is-xambaarkuna waa wax cid lagu dulminayo cidna loogu danaynayo oo dadka lagu kala xigsanayo markaa waxaa haboon in dadku cadaalad helo oo loo sinaado doorashada laakiin in la yidhaahdo dadku waa reer Somaliland hadana ma sina taasi waa cadaalad darro waxaana la yaab ah in deegaano dhan oo nabad ah xaqiiqada taalaana ay tahay Somaliland ciidankii Qarankuna ku sugan yahay in komishanku yidhaa doorasho kama dhacayso.
S: Laakiin Fu’aad miyaanay jirin musharixiin degmada u soo xushay oo u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Xudun ?
J: Aad iyo aad ayay u jiraan laakiin waxay ka yaaban yihiin dhaqdhaqaaq la’aanta doorashada ee ka taagan degmada Xudun, musharaxiintiina intooda badani imika waxay ku maqan yihiin xaga magaalada Laascaanood markaa lama garanayo waxay la soo guryo noqon doonaan oo waa bay yaaban yihiin.
Geesta kale gudoomiyaha degmada Xudun Faarax Cali Ibraahin ayaa sheegay in ay ka xun yihiin inaan illaa imika aanay u muuqan degmadaasi inay ka qabsoomayso doorashada Goleyaasha deegaanka ee lagu wado inay dalka ka qabsoonto 28-ka Bishan.
Guddoomiyaha degmaddu waxa uu ku dooday in shacbiga degmada Xudun ay u bisil yihiin inay galaan doorashada deegaanka isla markaana ay aad uga xumaan doonaan haddii laga reebo deegaamadda ay doorashadu ka dhacayso.
Previous PostShaqo ka fadhiisi iyo mudaharaadyo carqaladeeyey gaadiidkii Yurub iyo isku socodkii.Next PostMadaxweynaha Somaliland Oo Xadhiga ka jaray Mashaariic laga fuliyay Boorame	Blog